नेपालसंग रिसाएको भारतले फेरि गर्यो यस्तो घोषणा ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालसंग रिसाएको भारतले फेरि गर्यो यस्तो घोषणा ?
admin May 25, 2020 समाचार 0
पाम आयल आयात रोकेको भारतले नेपालवाट जाने चियाको आयातमा पनि रोक लगाएको छ । केही दिन अघि भारतले नेपालवाट निर्यात हुने पाम आयल आयातमा रोक लगाएको थियो । फेरी भारतले अनौपचारीक रुपमा नेपालवाट भारत तर्फ निर्यात हुने नेपाली चियामा पनि रोक लगाएको बताइएको छ । भारतले अनौपचारीक रुपमा चिया आयातमा रोक लगाएको हो ।
पाँच वर्ष अघि भुकम्पले तहस नहस भएको बेलामा पनि भारतले नेपालमा निर्यात रोक लगाएको थियो । अनौपचारीक रुपमा निर्यात रोक लगाउँदा नेपालमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुको अभाव झेल्नु परेको थियो । त्यतीबेला नेपालले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले नेपाललाई दववा दिन निर्यात रोकेको थियो ।
अहिले नेपाली भूभाग मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध सुरु भएको थियो । त्यो विरोधको वेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमीवाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी उद्घाटन पनि सम्पन्न गरेको छ । नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ । साथै नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारत चिढिएको छ ।
भारतले भुकम्पकै बेलामा अपनाएको अनौपचारीक नाकाबन्दी अहिले पनि लगाउन सक्ने आशँका गरेकै बेला विस्तारै त्यही नीति अख्तियार गर्न लागेको संकेत देखिएको छ । केही दिन अघि भारतले नेपालवाट निर्यात हुने पाम आयल रोकेको थियो । औपचारिक निर्णयविनै भारतले नेपाली चियाको आयातमा पनि रोक लगाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण चिया आयात गर्न नसकिने भारतीय पक्षले जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । वैशाख २८ गतेदेखि नेपालको चियाको आयात रोकिएको दार्जलिङको स्थानीय पत्रिका जनपथले पनि उल्लेख गरेको छ । चिया व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट वार्षिक चार अर्बको चिया निर्यात हुन्छ।
जलशाहले खोक़्रो राष्ट्रवाद मु,र्दाबाद भन्नुकाे कारण यस्ताे पाे रहेछ !